Sugamo Station, Tokyo (18th Dec)
12月18日、我々TTAJチームは、東京の巣鴨駅でチラシやポケットティッシュなどを配る周知活動を行いました。 今週は"AUN "チームのご協力をいただいて募金活動を行いました。
"We will expel the evil military dictatorship till the end" ✊🏻
18th of December , TTAJ did pamphlet and pocket sharing activity at Sugamo Station, Tokyo. "AUN" team collaborated with us this week activity for fund raising in order to support CDMers and other areas needed for help in Myanmar.
We were able to hand out over 200 pamphlets and 200 pocket tissues from 11:00am till 2:00 pm.
"စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင် မောင်းထုတ်ပစ်ကြမယ်"✊🏻
ယမန်နေ့ ၁၂ လပိုင်း ၁၈ ရက်နေ့မှာ TTAJ အဖွဲ့အနေနှင့် Pamphlets / Pocket Tissue ဝေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို Tokyo/Sugamo ဘူတာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
ယခုတစ်ပတ် TTAJ အဖွဲ့၏ လှုပ်ရှားမှုတွင် Associations of United nationalites In Japan မှလည်း လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး လိုအပ်တဲ့နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် အလှူငွေကောက်ခံခြင်းလှုပ်ရှားမှုကို ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
နေ့လည် ၁၁ နာရီမှ ၂ နာရီ အတွင်းလက်ကမ်းစာစောင်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်၊ တစ်ရှူး အခုရေ ၂၀၀ ကျော်ကို ဂျပန်ပြည်သူ/သားတွေ လက်ဝယ်အရောက် ဝေငှပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။